मनोरंजन Archives - Page2of5- Taja Report
‘लाइफमा पार्टनर त चाहिन्छ’ : स्वेता खड्का
August 2, 2018 Comments Off on ‘लाइफमा पार्टनर त चाहिन्छ’ : स्वेता खड्का
अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधनपछि उनकी श्रीमती अभिनेत्री स्वेता खड्काको अवस्था देख्दा धेरैलाई लागेको थियो, उनलाई सामान्य जीवनमा फर्किन अब गाह्रो होला । अचेल स्वेताको मुहारमा छाउने मुस्कानले देखाउँछ, उनको जीवनमा हराएको खुसी फेरि फर्किसक्यो । [ पुरा पढ्नुहोस ]
July 31, 2018 Comments Off on बलिउडका आदर्श जोडी जसले श्रीमतीलाई रानी बनाएर राखेका छन्
एजेन्सी – बलिउडमा केही स्टारहरू यस्ता छन्, जसले श्रीमतीलाई रानी बनाएर राखेका छन् । उनीहरू आफ्नी श्रीमतीलाई हरेक कार्यक्रममा लैजान छुटाउँदैनन् । यहाँसम्म कि उनीहरूका लागि श्रीमतीसँगको प्रेमबाहेक अरू कुनैे कुरा ठूला छैनन् । यस्तैमा [ पुरा पढ्नुहोस ]
क्यान्सराबाट ग्रसित सोनाली बेन्द्रेको स्वास्थ्य अवस्था झन जटिल बन्दै
July 30, 2018 Comments Off on क्यान्सराबाट ग्रसित सोनाली बेन्द्रेको स्वास्थ्य अवस्था झन जटिल बन्दै
केहि समयदेखि क्यान्सरको उपचार गराइरहेकी बलिउड अभिनेत्री सोनाली बेन्द्रेकोे अवस्था दिनदिनै जटिल बन्दै गएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ । उपचारको लागि न्युयोर्कमा रहेकी सोनालीलाई हाइ ग्रेड क्यान्सर भएको थियो । उपचारको लागि उनले आफ्नो [ पुरा पढ्नुहोस ]
यौन सन्तुष्टिको हिसाबले मोटी कि पातली युवती ठिक ? जानी राखौ
July 28, 2018 Comments Off on यौन सन्तुष्टिको हिसाबले मोटी कि पातली युवती ठिक ? जानी राखौ
मानिसहरू धेरै भन्दा धेरै यौन सन्तुष्टि कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चासो राख्ने गर्छन्। कतिले त यौन सन्तुष्टि पाउने नाममा लिंगको आकार बढाउनुपर्छ भन्ने ठान्छन्। सञ्चारमाध्यममा गरिने यौन स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञापनको आधारमा लिंगको आकार बढाउन औषधि [ पुरा पढ्नुहोस ]
अरू सारी फालेर हिट हुन्छन्, म चाहिँ सारी लाएरै हिट भएँ :सुनिता
July 28, 2018 Comments Off on अरू सारी फालेर हिट हुन्छन्, म चाहिँ सारी लाएरै हिट भएँ :सुनिता
काठमाडौं : रेडियो र भिडियो जक्की हुँदै लोकगायिका बनेकी सुनिता दुलाललाई साउन लागेसँगै भ्याइ-नभ्याइ छ। अहिले उनी तीज गीतको रेकर्डिङमा निकै व्यस्त छिन्। तीज गीत गायिकाका रूपमा चिनिएकी सुनिताका ‘चेलीको माइतीघर’, ‘फेरि आयो माइत जाने [ पुरा पढ्नुहोस ]
‘मेरी मामु’को शिर्ष गीत रिलिज- ‘आमा’को महत्व खोज्दै आयुव (भिडियोसहित)
July 27, 2018 Comments Off on ‘मेरी मामु’को शिर्ष गीत रिलिज- ‘आमा’को महत्व खोज्दै आयुव (भिडियोसहित)
काठमाडौं । निर्माता तथा कलाकार सन्तोष सेनको आगामी फिल्म ‘मेरी मामु’ को शिर्ष गीत सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै फिल्मका निर्माण पक्षले ‘आमा’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक गरिएको ‘आमा’ [ पुरा पढ्नुहोस ]
बच्चा जन्माउन अमेरिका कुद्नेहरुलाई लाग्नसक्छ झड्का
July 26, 2018 Comments Off on बच्चा जन्माउन अमेरिका कुद्नेहरुलाई लाग्नसक्छ झड्का
बाल्टिमोर । अमेरिकाले कुनै सभा समारोहको लागि मात्रै कोही आउन चाह्यो भने पनि धेरैजसो पर्यटकलाई कम्तिमा ५ वर्षको भिषा दिन्छ । उसको आवत जावतको प्रकृति हेरेर यो पाँच वर्षको अवधीमा कम्तीमा ६÷६ महिनाको लागि अमेरिका [ पुरा पढ्नुहोस ]
July 23, 2018 Comments Off on राजेश हमालसंग विवाह गर्नु अघिकी मधु यस्ती र यो काम गर्थिन (तस्बिर सहित)
काठमाडौँ । नेपाली सिने उद्योगका स्टार नायक हुन् राजेश हमाल । ०४६ सालमा ‘युगदेखि युगसम्म’बाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनले अहिलेसम्म झन्डै तीन सय सिनेमामा अभिनय गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत सिनेमा हिट रहेको [ पुरा पढ्नुहोस ]
अन्जु पन्तका १० विवाद : पैसाका लागि हुरुक्क, केटा भनेपछि जुरुक्क !
July 21, 2018 Comments Off on अन्जु पन्तका १० विवाद : पैसाका लागि हुरुक्क, केटा भनेपछि जुरुक्क !
काठमाडौं । गायिका अञ्जु पन्तको स्वरमा जति भावुकताको मिठास अरुका स्वरमा विरलै भेटिएला । एउटा गजलमा भरेको स्वरले दिएको उचाईसँगै अञ्जुको गायन यात्राले पनि गति लियो । गायन नेपालमा एउटा राम्रो पेशा पनि बनिसकेको छ [ पुरा पढ्नुहोस ]
इन्गेजमेन्टपछि पनि नबदलिएकी प्रियंकाको हट अवतार ! (हेर्नुस १० तस्बिरमा )
July 21, 2018 Comments Off on इन्गेजमेन्टपछि पनि नबदलिएकी प्रियंकाको हट अवतार ! (हेर्नुस १० तस्बिरमा )
काठमाडौं ५ साउन – नायिका प्रियंका कार्की बोल्ड छवि बनाउन सफल छिन् । प्रियंका आफूलाई विन्दास शैलीमा प्रस्तुत पनि गर्छिन् । सायद, यही कारणले हुनसक्छ प्रियंकाको चर्चा खुबै हुनेगर्छ । पछिल्लो दिन नायक आयुष्मान देशराज [ पुरा पढ्नुहोस ]
विवाहित पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई ५ वर्ष जेल र ५० हजार जरिवाना (100)